Anker PowerConf C300, igwefoto kamera mara mma na nsonaazụ ọkachamara | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 01/06/2021 10:00 | Emelitere ka 27/05/2021 20:04 | General, Nyocha
Nrụkọ ọrụ, nzukọ, oku vidiyo ebighi ebi ... may nwere ike ịchọpụta na kamera kamera na igwe okwu nke laptọọpụ gị adịghị mma dịka ị tụrụ anya ya, ọkachasị ugbu a ụdị nkwukọrịta dijitalụ a abụrụla ihe a na-ahụkarị. Taa, anyị ewetara gị ihe ngwọta mara mma maka ọrịa niile a.
Anyị na-enyocha Anker PowerConf C300 ọhụrụ, kamera arụmọrụ na-arụ ọrụ na mkpebi FullHD, Ogologo Ebe, na Artificial Intelligence features. Chọpụta anyị njirimara niile nke ngwaọrụ a dị iche na ihe kachasị ike ma e jiri ya tụnyere ndị na-agba mbọ, yana n'ezie yana isi adịghị ike ya.
2 Nwụnye na customizable software
Anyị amaworị Anker tupu mgbe ahụ, ọ bụ ụlọ ọrụ siri ike nke na-etinye nzọ na atụmatụ na ngwa ahịa dị elu na ngwaahịa ya, ihe mmekọrịta mmekọrịta ya na-eme ka o doo anyị anya nke ọma. Banyere imewe ahụ, ọ nwere usoro a maara nke ọma, anyị nwere etiti etiti ebe ihe mmetụta dị na etiti, gbara ya gburugburu na-acha ọla edo mara mma nke anyị ga-agụ ike ya. Njikere 1080p (FullHD) na ọnụego 60FPS. A na-eji plastic matte rụọ azụ ahụ nke na-enye mmetụ nke ịdị mma na ike siri ike. O nwere oghere maka eriri n'otu akụkụ azụ ahụ USB-C nke ga-eme dị ka naanị njikọ.
USB-C cable bụ 3m ogologo
Nke ikpeazụ bụ ọnọdụ dị mma n'ihi na ọ na-enye gị ohere iji ohere karịa. Banyere nkwado ahụ, ọ nwere nkwado na mpaghara ala, enwere ike ịhazi na 180º yana eri maka nkwado ma ọ bụ njem njem oge ochie. Ọ nwere ihe abụọ ọzọ na-akwado isi na àmà nke 180º na n'ikpeazụ na mpaghara elu, ebe igwefoto Ọ ga-ekwe ka anyị bugharia ya 300º horizontally ọzọ 180º vetikal. Nke a na - enye gị ohere ịmegharị igwefoto iji mee ihe na tebụl, na njem ma ọ bụ site na nkwado n'elu nyocha ahụ, ebe ọ gaghị eweghara ohere na ihuenyo ahụ.
N'akụkụ a anyị na-ahụ mgbakwunye na-adọrọ mmasị, n'agbanyeghị enweghị usoro mmechi iji kpuchie anya elekere anya na igwefoto, Ee, Anker gụnyere mkpuchi abụọ nwere usoro eji eme ihe na ngwugwu nakwa na ha dị, anyị nwere ike itinye ha ma wepu ha na uche na ihe mmetụta ahụ, n'ụzọ dị otú a anyị ga-enwe ike imechi igwefoto ma hụ na ha anaghị edekọ anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha ejikọrọ na ya. Agbanyeghị, anyị nwere akara ngosi ihu ihu nke ga - adọ anyị aka na ntị banyere ọnọdụ ọrụ igwefoto.
Nwụnye na customizable software
Na isi nke Anker PowerConf C300 a Ikwunye & Gwuo, site na nke a ka m na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi naanị site na ijikọ ya na ọdụ ụgbọ mmiri USB-C nke kọmputa anyị, Otú ọ dị, anyị na-esonyere USB-C na USB-A nkwụnye maka ikpe ebe ọ dị mkpa. Usoro ọgụgụ isi ya na ikike autofocus kwesịrị izu oke ụbọchị anyị taa. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịnwe ngwanrọ nkwado, na nke a anyị na-ekwu maka ya AnkerWork na ị nwere ike ibudata n'efu, n'ime ya anyị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ, mana ihe kachasị mkpa bụ ohere nke imelite sọftụwia igwefoto wee si otú a na-agbatị nkwado ya.
Na ngwanrọ a anyị ga-enwe ike ịhazigharị akụkụ nlele atọ nke 78º, 90º na 115º, nakwa dị ka na-ahọpụta n'etiti atọ kpọọ àgwà n'etiti 360P na 1080P, aga site na omume nke ukpụhọde fps, rụọ ọrụ ma deactivating na-elekwasị anya, na HDR na a Ọrụ mgbochi Flicker Na-adọrọ mmasị mgbe ọkụ LEDbs na-enye anyị ìhè, ị maraworị na n'ọnọdụ ndị a, flickers na-apụtakarị nwere ike iwe iwe, ihe anyị ga - ezere. N'agbanyeghị ihe niile, anyị ga-enwe usoro ndabere atọ dabere na mkpa anyị na na tiori na-eji Anker PowerConf C300 eme ihe n'ụzọ zuru oke:
Ọnọdụ Nke Onwe
Anyị na-akwado gị na ihe omume ị kpebiri na igwefoto a dị na weebụsaịtị Anker na Amazon, na ị na-agba ọsọ iji wụnye Anker Work ma were ohere iji melite ngwa ngwa nke igwefoto, dịka ọ ga-adị mkpa iji rụọ ọrụ ma gbanyụọ ọrụ HDR.
A kwadoro Anker PowerConf C300 maka iji ya mee ihe ziri ezi na ngwa dị ka Mbugharị, n'ụzọ dị otú a, anyị kpebiri na ọ ga-abụ igwefoto kachasị eji maka mgbasa ozi nke iPhone News Podcast. Na nke sitere na Actualidad Gadget anyị na-esonye kwa izu yana ebe ị ga-enwe ike ịghọta ogo onyonyo ya. N'otu aka ahụ, anyị nwere igwe okwu abụọ nwere nkagbu nke ọdịyo na-arụ ọrụ iji wepụta olu anyị nke ọma ma kpochapụ ụda mpụga, ihe anyị nwere ike ịchọpụta na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Igwefoto ejiri aka na ọnọdụ ọkụ dị ala ebe ọ bụ na o nwere usoro mgbazi onyonyo maka ikpe ndị a na akpaghị aka. Anyị ahụbeghị nsogbu ọrụ ọ bụla na macOS 10.14 gaa n'ihu, ma ọ bụ na nsụgharị nke Windows dị elu karịa Windows 7.
Obi abụọ adịghị ya na a na-ewere ya dị ka ngwa ọrụ doro anya maka nzukọ ọrụ anyị na-ekele maka ogo nke igwe okwu ya na ntụgharị dị iche iche ọ na-enye anyị, ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ nzọ na Anker PowerConf C300 n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ị gaghị emehie, ruo ugbu a, nke kachasị mma anyi anwaala. Nweta ya site na euro 129 na Amazon ma ọ bụ na weebụsaịtị nke ya.
Ihe na: 1 June nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: Mee 27 nke 2021
Elu-edu ihe na imewe
Ezigbo mma oyiyi
Nnukwu ụda ụda na autofocus
Sọftụwia nke na - eme ka ọ dị mma na ezigbo nkwado
Akpa eji ebu na-efu efu
Sọftụwia ahụ bụ naanị bekee
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Anker PowerConf C300, igwefoto kamera mara mma na nsonaazụ ọkachamara
Huawei Band 6, smartband zuru oke na ahịa [nyocha]